स्वास्थ्य संस्थामा न त स्वास्थ्यकर्मी छन् न त औषधि नै छ जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
बिहिबार १५ असोज, २०७७ | Thursday, October 1st, 2020
स्वास्थ्य संस्थामा न त स्वास्थ्यकर्मी छन् न त औषधि नै छ
शुक्रबार ४ ब‌ैशाख, २०७२
जाजरकोट । जाजरकोटमा चैतको दोस्रो साता रुघाखोकी, ज्वरो आउने, हातखुट्टा दुख्ने अज्ञात रोग देखियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणपछि स्वाइनफ्लु पुष्टी भयो । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा यो रोगले महामारीको रुप लिएको स्थानीयको भनाइ छ । अझै पनि दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा न त स्वास्थ्यकर्मी छन् न त औषधि नै छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
बारेकोटको लिम्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक मेडिकल अधिकृतसहित एक दर्जन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर, स्थापनाकालदेखि नै मेडिकल अधिकृत पुगेका छैनन् । दरबन्दीमा भएका स्वास्थ्यकर्मीसमेत नबस्दा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन् ।
बारेकोटमा मात्र होइन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दै गर्खाकोटको हालत पनि उस्तै छ । एक जना मेडिकल अधिकृतसहित एक दर्जन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएको गर्खाकोटमा पनि मेडिकल अधिकृतसहित आधादर्जन दरबन्दी रिक्त छ ।
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको स्वास्थ्यकेन्द्र गर्खाकोटमा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा नाम मात्रको भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
त्यस्तै, दल्लीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि एक जना अहेवको भरमा चलेको छ । दरबन्दी भए पनि डाक्टर नआएकाले केन्द्र अहेवले चलाउँदै आएका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा गएका विरामीले औषधिसमेत नपाएको पैंक-१ का मोहन शाहीले बताए ।
दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेकोले स्थानीयले महामारीका बेलासमेत उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
हरेकले आफ्नो नीजि अं’गका लागि गर्ने यी ७ गल्तीहरु जान्नुहोस्, जीवनका लागि आजै सुधारौ
चितवन मेडिकलका स्वास्थ्यकर्मीले जब विरामी महिलालाई मसाज गर्नुपर्ने भन्दै नीजि अंगमा…
दुई नेपाली युवतीलाई बाबाजीको पूजामा ब$लि दिन लैजादै गर्दा भारतिय सीमाबाट पक्राउ
छोरा बिग्रिए कमर्स, छोरी बिग्रिए नर्स भन्ने समाजलाई समयले नै जवाफ दियो
डिआईजि सिंहको आदेशमा पर्सा प्रहरीको टोलीद्धारा ७ हजार बोरा तस्करीको केराउ पक्राउ
आजदेखि देशभर सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन, कुन सामानमा कति छुट ?
कोरोनाले विदेशबाट आएका नेपालीलाई सरकारले देखेन, दैनिक ६ हजार भारत फर्किदै
नेपाल लगायत गरिब राष्ट्रलाई विश्व बैंकले भ्याक्सिन किनिदिने
सत्ता र प्रतिपक्षमा भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त
आईपीएलमा कोलकातासँग राजस्थानले पहिलो हार व्यहोर्‍यो
जर्मन सुपर कपको उपाधि बायर्न म्युनिखले जित्यो, डर्टमुन्ड पराजित
सवारी साधनमा यस्तो नयाँ नियम लागु
साक्षत देवी पाथिभराको कृपा लिदै राशिफल पढ्नुहोस् : २०७७ असोज १५ गते बिहिबार
बुधबार १४ असोज, २०७७
१२ वर्ष साङ्लोमा वाँधिएको छोरो २० महिनापछि ठिक भएर आएपछि वृद्ध आमा दङ्ग
यी तस्विरले कसको मन रुदैन, कसको मन आत्तिदैन [ ११ तस्विर ]
कोरोनाबाट विश्वभर तीन करोड ३९ लाख संक्रमित, १० लाख १३ हजारको मृत्यु [कुन देशमा कति]
कोरोना नियन्त्रणमा पाकिस्तानबाट विश्वले सिक्नुपर्छ भन्दै डब्लुएचओ प्रमुखले गरे उच्च प्रसंशा
लकडाउनपछि भारतले जारी गर्यो अनलक–५ : के नेपालमा पनि यस्तै होला ?